Madaxweyne Rayaale Oo Golaha Wakiilada Dib Ugu Celiyay Xeerkii Habka Miisaaniyada Qaranka | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN)-Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin ayaa golaha Wakiilada dib ugu soo celiyey Xeerkii miisaaniyadda Qaranka ee ay ansixiyeen horaantii bishan. Ka dib markii mudanayaashu ka yeesheen dood, isla markaana gebagebadii doodaa Cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen.
Sida lagu sheegay Warsaxaafadeed kooban oo ka soo baxay golaha wakiilada, waxa uu Madaxweyne Rayaale maanta dib ugu soo celiyay Xeerkii Miisaaniyada Qaranka. Qoraalka kasoo baxay Xarunta Golaha wakiilada oo uu ku saxeexnaa ku simaha xoghayaha guud ee golaha Wakiilada Cabdirisaaq Siciid Ayaanle, isla markaana ah Xoghaye ku xigeenka golahaa, wuxuu isagoo dhamaystiran u qornaa sidan:-
“Waxaa maanta oo Taariikhdu tahay 31/05/2010 uu Madaxweynaha JSL golaha Wakiilada ku soo celiyey Xeerka Miisaaniyada qaranka oo uu goluhu u gudbiyey 11/05/2010.”
Dhinaca kalena, Madaxweynaha Somaliland Daahir Rayaale Kaahin waxa uu soo saaray maanta digreeto uu ku dhaqan gelinayo wax ka bedelka iyo kaabista lagu sameeyey xeerka doorashooyinka ee xeer Lambar No.20, kaas oo ay todobaadyadii ina dhaafay golayaasha sharci dejintu ansixiyeen. Ka dib markii wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyay si aanu carqalad ugu noqon hawlaha doorashada. Waxaana meelaha wax ka bedelka iyo kaabista lagu sameeyay ka mid ah mudada Ololaha doorashada Madaxtooyada oo lagu soo koobay 21 maalmood.